Wariyeyaal Reer galbeed ah oo Maanta lagu toogtay bariga dalka Afghanistan |
Wariyeyaal Reer galbeed ah oo Maanta lagu toogtay bariga dalka Afghanistan
Laba wariye oo reer galbeed ah oo shaqeynayay AP ayaa maanta lagu toogtay bariga dalka Afgaanistaan, xilli lagu wado in berri ay ka qabsoonto doorashada madaxnimo ee dalkaas.
Toogashada labadan wariye oo haween ahaa ayaa ka dhacday gobolka Khost oo ka mid ah gobollada u rabshadaha badan dalka Afgaanistaan, iyadoo mid ka mid ah ay goobta ku dhimatay halka mid kalena uu gaaray dhaawac halis ah. Iyadoo suxufiyiintan uu toogtay askari ka tirsan booliiska Afgaanistaan.
Anja Niedringhaus oo 48-jir ahayd ayaa dhimatay, waxayna ahayd sawir-qaade u dhalatay dalka Jarmalka, iyadoo suxufiyadda kale ee dhaawaca soo gaaray oo lagu magacaabo, Kathy Gannon una dhalatay dalka Canada ay ahayd tabiye.
Goobjoog la hadlay ABC News ayaa sheegay in laba suxufi uu toogtay nin xirnaa dharka booliiska Afgaanistaan, waxaana dilkooda uu yimid xilli ay labadoodu isku diyaarinayeen inay soo tabiyaan wararka ku saabsan doorashada.
Wasiirka arrimaha gudaha Afgaanistaan ayaa sheegay in ruuxii toogtay labadan wariye la xiray. Inkastoo uusan bixin faahfaahin intaas ka badan.
“Anja and Kathy waxay muddo badan ka shaqeynayeen Afgaanistaan, waxayna kasoo tabinayeen wararka ku saabsan colaadaha. Anja waxay ahayd wariye aad loo jeclaa,” sidaa waxaa yiri tifaftiraha AP, Kathleen Carroll.
Dilka wariyeyaashan ayaa imaanaya iyadoo wariye u dhashay dalka Sweden oo lagu magacaabi jiray Nils Horner oo 52-jir ahaa lagu dilay dalka Afgaanistaan, iyadoo dalka Afgaanistaan uu sanadkan noqoday dalka ugu badan ee lagu dilay wariyeyaasha ugu badan bilaha ugu horreeya sannadkan 2014-ka.
Toogashada wariyeyaashan ayaa imaanaysa iyadoo amniga dalkaas la adkeeyay doorashooyinka ka hor. Iyadoo madaxweynaha cusub ee la dooranayo uu bedeli doonaa madaxweyne Xamiid Karasaay oo xilka hayay illaa sannadkii 2001-dii.
Ku dhawaad 200,000 oo askari ayaa la geeyay qaybaha kala duwan ee dalkaas si ammaanka doorashada loo sugo. Waxaana doorashada loo asteeyay inay ka qabstooto dalkaas maalin kaddib.